Junk Jack X, iko kwekugadzira mitambo kunogara pa | IPhone nhau
Mitambo ine chinhu chakanyanya kufanana neyaMinecraft yave kubudirira, kunyanya kana tichitaura nezve maviri-mativi edhisheni akadai seBlockheads, Terraria kana Junk Jack X, zita ratiri kutaura nezvaro nhasi.
MuJunk Jack X tinozviwana tiri pakati pekusaona, tichizvimanikidza kutanga kubva pakutanga kusvika tora zviwanikwa izvo zvinotibvumidza isu kuvaka dzakasiyana zvinhu kuti tirarame uye ndezvekuti husiku, mafungu emhuka, madandaude uye zombies zvinotirwisa pasina tsitsi.
Chimwe chinhu chatichazoshandisa zvakanyanya ndeye mapa inosanganisirwa muJunk Jack X, kunyanya kana vakatiuraya uye isu tichida kutsvaga saiti iyo yatave tichishandira kugadzira nhare yedu.
Chimwe chinhu chekuratidzira mukana we kuenda kumapuraneti akasiyana kunakidzwa nemutambo zvakare uye zvakare asi munzvimbo dzisingazivikanwe kudzivirira monotony.
Ehezve, kana zvese zvandakuudza kusvika parizvino zvichinzwika seChinese, usazvidya moyo nekuti Junk Jack X inopa dzidzo yakakwana matiri tichakwanisa kuregedza zvakakosha zvinhu kuti tikwanise kunakidzwa nemutambo werudzi urwu.
Kamwe isu tiri nyanzvi mumunda, tinogona kuita kusvetuka kuenda maitiro evazhinji Junk Jack X, chimwe chinhu chinokwezva chinotibvumidza kunakidzwa nemitambo nevamwe vashandisi. Isu rekudyidzana rakakosha pano uye isu tinofanirwa kugadzira misungo, kuunganidza zvinhu, nezvimwe. Ichokwadi ndechekuti kutamba multiplayer neshamwari mufaro chaiwo.
Muchidimbu, Junk Jack X yakanangana nevateereri chaivo vanofarira nerudzi urwu rwemutambo. Mune ino shanduro tinogona kunakidzwa zvimwe zvinhu, vavengi vakawanda nazvo zvekurwa uye zvimwe zvinhu zvekutarisa kunyangwe izvo kana, pfungwa uye mutambo wemitambo zvinoramba zvisina kuchinja.
Zvakadaro, Junk Jack X mutambo uyo zvakakosha kuedza Uye kunyangwe iwe usiri nyanzvi mumunda, zvishoma nezvishoma iwe unozokomberedzwa paunosvika pakuziva zvakavanzika zvese nemikana yemutambo werudzi urwu. Nezve 4,49 euros, unogona kunakidzwa neJunk Jack X pane yako iPhone kana iPad sezvo mutambo uri wepasirese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Junk Jack X, iko kwekugadzira mitambo kunorarama